दुर्गमताले संसारलाई दिएको उपहार - Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
दुर्गमताले संसारलाई दिएको उपहार
लेखक : जोन उड अनुवादक : सिपी अर्याल, सुन्दर खनाल प्रकाशकः वी रिड पृष्ठः २८६, मूल्य ४५० रुपैयाँ
अन्नपूर्ण पदमार्गले जोन उडको पुरै जिन्दगीको यात्रा बदलियो । जोनको जीवनमा त्यो ट्रर्निङ पोइन्ट नआएको भए आज अफ्रिका तथा एसियाका लाखौ–लाख बालबालिकाहरु हातमा किताब च्यापेर अक्षरसंग साउती मार्दै साक्षरताको महान यात्रा गरीरहेका हुने थिएनन् ।
दुर्गमताले पनि कसैलाई मोहित बनाउँछ भनेको सुन्दा हाम्रो जस्तो विकटताले भरिएको मुलुकका मानिसलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । किनकी विकटतामा पुस्तौपुस्ता विताउँनेहरुका लागि यहि विकटता नै अभिषाप हो । दुरदराज कुनाकन्दरामा घाँस दाउरा गर्दै जीवन विताउँनेहरुका लागि सहर सपना हो । अमेरीकामा जन्मिएर माइक्रोसफ्ट जस्तो उच्चकोटिको संस्थामा गजब जागिरे जोन उडले विश्वका दर्जनौ नामी सहरहरु फन्को मारे । उनको लागि दुर्गमतासंग साक्षात्कार हुनु सौख र सपनाको विषय थियो । अन्नपूर्ण पदमार्ग र यसको दुर्गमता बारे पहिलो पटक सुन्न वितिकै जोन रोमाञ्चित भएका थिए । उनको दुर्गमताको मोहलाई व्यस्त जीवनशैलीले छेक्न सकेन त्यसैले त व्यस्त जीवनशैलीलाई पन्छाउँदै अन्नपूर्णको काखमा लुटपुटिन आईपुगे ।
अन्नपूर्ण यात्राको क्रममा स्रोत नै नभएको लमजुङका स्रोत व्यक्ति पशुपति न्यौपानेसंग भेट भयो । उनैले बाहुनडाँडाको एउटा विद्यालयमा पु¥याए । विद्यालयको अवलोकन गरे । बर्षादले हिलाम्य भुई, भेन्टिलेशन नभएको कोठा, लामो बेञ्च एउटै कोठामा कोचाकोच विद्यार्र्थी बढो चाख मानेर अवलोकन गरे । जब विद्यालयको पुस्तकालयमा पुगे उनलाई आश्चर्य र निराशाले एकैचोटी गिजल्यो । पुस्तकालय लेखिएको बोड र एउटा थोत्रो दराज बाहेक त्यहा केहि थिएन । दराजमा खियाँ लागिसकेको भोटे ताल्चा देखेपछि उनि भन्न बाध्य भए अघिको जस्तै एक कप चिया पियन पाइन्थ्यो की ? अति नै अमुल्य चिज जस्तो गरी राखिएको दराजमा केहि थान किताबहरु थिए । त्यो पनि अति नै पराना । भित्तामा झुण्डाइएका विश्वमानचित्रमा अहिले अस्तित्वमा नै नरहेका युगोस्लिाभिया, पूर्वी जर्मनी र सोभियतसंग जस्ता भूभागहरु थिए ।
विद्यालय तथा पुस्तकालयको हालत देखेर उनी बेचैन भए । चाहेको जस्तो पुस्तक बालबालिकाले पढ्न नपाउनु उनको कल्पना बाहिरका कुरा थिए । पुस्तकका सौखिन पढन्ते उडको बाल्यकालमा पुस्तकको कहिल्यै अभाव भएन । अझ आठौँ जन्मदिनको अवसरमा बुबाआमाबाट चम्किलो हरियो साईकल उपहार पाएपछि त अरु के चाहियो ? त्यहि चम्किलो साईकल ढल्काउँदै स्पाल्डिङ स्मृति पुस्तकालय पुगेर आफुलाई मन पर्ने मनगे पुस्तक ल्याउथे कतिसम्म भने फुच्चे पढन्तेले कहिलेकाहि त पुस्तकालयका कर्मचारीलाई मख्ख बनाएर गोप्य सहमती गर्थे अनि कसैलाई नभन्ने सर्तमा घर लान पाउने भन्दा बढी पुस्तक झोला भराएर लिन्थे ।
करिब आठहजार फिटमाथी अन्नपूर्णको फन्को मार्दा पनि उडका मन बारम्बार बाहुनडाँडातिरै डौडिरह्यो । अनि पुस्तकालयमा पुस्तक भरिभराउ बनाइदिने जोसिलो विचार दौडिरह्यो । त्यहि दिन थियो जसले बाहुनडाँडाको खाली पुूूस्तकालय मात्र भरिभराउ बनाएनन् उड माइक्रोसफ्टको जागिर छोडेर साक्षरताको अभियानमा उत्रिए । रुम टु रिडको स्थापना भयो । स्थापनाको १५ वर्षमा पुग्दा १५ हजार पुस्तकालय र १६ सय विद्यालयहरु यहि संस्थाको नेतृत्वमा स्थापना भएको छ । भारत, बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया, तान्जानिया, लाओस, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका र जाम्बिया गरी दस देशमा आफ्नो आयतन फैलिएको छ । रुम टु रिड विश्वमै तीव्रगतिमा विकास भएको संस्थाको रुपमा दरिएको छ । उडकै भाषामा भन्ने हो भने विश्वकै ठूलो बालसाहित्य प्रकाशक पनि । यस संस्थाले गर्नै पर्ने तर गाह्रो काम मातृभाषामा पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । शिक्षाको प्रारम्भिक चरण मातृभाषामै हुनुपर्नेमा विश्वका पायः सबै शिक्षाविदहरुले स्विकार गरेका छन् । युनेस्को १९५१ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ “यदि विद्यालय शिक्षाको शुरुवात नै बालबालिकाहरुले तनावपूर्ण वातावरणमा सिक्नु पर्ने बाध्यतालाई समाप्तपार्दै गुणस्तिरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि बलियो शैक्षिक जग तयार पार्ने हो भने पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र व्यवस्थित बनाउनका साथै उनिहरुको मातृभाषालाई पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमि तह (१–३ कक्षा) मा अनिवार्य बनाउन सक्नु पर्छ ।” यसर्थ मातृभाषामा पुस्तक प्रकाशन गर्नु पनि रुम टु रिडले चाडै सफलता पाउनुको एउटा कारण भन्न सकिन्छ ।
रुम टु रिडले यहाँसम्म आईपुग्दा थुप्प्रै अरोह अवरोह पार गरेको छ । अनेकौ रोमाञ्चक कहानीहरु छन् । तीष्ण दिमाग र सुन्दर अभिव्यक्ति शैली भएको उडले संस्था खोल्दाका सुरुवाती दिनहरुबारे माइक्रोसफ्टदेखि बाहुनडाँडासम्ममा कथा हालेका छन् भने । उनको यो दोस्रो पुस्तक साक्षर संसारतिरमा आफैले खोलेको विश्वकै सफल परोपकारी संस्थालाई अगाडी बढाउँदाको रोमाञ्चक कथाहरु छन् । नेपालदेखि सुरु भएको यो महाअभियान विभिन्न मुलुक तथा अफ्रिकासम्म फैलिदाका रोमाञ्चक घटनाहरु पढ्दा भन्न मन लाग्छ विकटताले विश्वलाई साक्षर संसारतिर डो¥याउने सामाथ्र्य राख्दछ ।
Published On: Sunday, October 23, 2016 Time : 17:54:24 1482पटक हेरिएको